Olom-panjakana hitondra firenena | NewsMada
« Tsy kilalaon-jaza ny firenena », hoy ny iray amin’ireo kandidà 36 ireo, fony izy efa nitantana an’i Madagasikara. Mbola izy ihany koa no niteny fa « mora manadino ny Malagasy ». Raha raisina ireo teniny roa ireo, toa tsy araka ny nolazainy ny ataony, raha tarafina amin’ity fitakiany hanemorana ny fifidianana ity, iarahany amin’ny kandidà miisa 25. Tsotra ny fanazavana, “hadinony sa mody hadinony” ny ataony, mandray ny fitantanana ny firenena ho toy “ny kilalaon-jaza”. Milaza fa vonona hifaninana, hirotsan-kofidina, nefa aty amin’ny fisasahan’ny fotoan’ny fampielezan-kevitra, milaza indray fa “ahemory ny fifidianana”?
Raha jerena indray ny votoatin’ny fitakian’izy ireo, efa nazava hatry ny ela ny fanomanan’ny Ceni ny mpifidy, hisoratra anarana, efa ho herintaona mialoha, ny fijerena ny anarana any anaty lisi-pifidianana, sns. Raha nisy ny lesoka tsy naha tomombana izany, azon’ireo tsy voasoratra natao tsara ny nanamarina nitondra porofo fa “voasoratra tany am-boalohany ary niala indray izany taty aoriana”, ohatra.
Maro ny fikambanana fiarahamonina sivily, manara-maso ny fifidianana, toa tsy nahenoana tatitra ofisialy nitaraina tany amin’ny Ceni na ny HCC, mandraka ankehitriny. Fa toa kandidà mpanao politika fantatra ny fironany no hita miray hina “mitaky tsy hanatontosana ny fifidianana”. Tsy hita soritra ny fahamatorana amin’ny fanaovana politika, na ny maha “olom-panjakana h(m)itondra firenena”.
Samy manana ny fijeriny sy ny heviny any anatiny any avy ny vahoaka malagasy tsirairay sy ny any ivelany lazaina fa mpiara-miombon’antoka vahiny amin’i Madagasikara, na firenena io na fikambanana iraisam-pirenena tsy miankina, na mpampiasa vola vahiny mikasika ny zava-misy eto amintsika. Sao sanatria raisin’izy ireny ho toy “ny kilalaon-jaza ny fanaon’ireo mpanao politika eto amintsika”, raha tsy hiteny afa-tsy ny antoko maherin’ny 200, ny kandidà nirotsaka miisa 46, ka voasivana ny 36, ary ireo mivondrona ho iray indray ny 25. Tsy ary hita tany amin’ny firenen- kafa ny eto Madagasikara, sao manamarina an’ilay hoe : “firenena manan-karena fa anisan’ny mahantra indrindra maneran-tany”. Mahamenatra!